Tsy manan-kialofana, tsy manan’asa, tsy manam-bola, toherin’ny mponina ny fanakatonana ny nosy Boracay ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Tsy manan-kialofana, tsy manan'asa, tsy manam-bola, toherin'ny mponina ny fanakatonana ny nosy Boracay ao Filipina
Voadika ny 08 Mey 2018 5:27 GMT
Tora-pasika fotsy an'i Boracay. Saripika: Alexey Komarov. CC BY 3.0
Miaka-peo ny mponina sy ny mpiasa ao amin'ny nosy Boracay any Filipina mba hanohitra ny baikon'ny governemanta hanakatona ny toeram-piala-tsasatra malaza manerana izao tontolo izao mandritra ny enim-bolana mba hanatanterahana ny asa fanavaozana ahitana ny fanatsarana ny fanariana maloto efa antitra ao amin'ny nosy.
Tamin'ny fanasoniavana ny Fanambaran'ny filoham-pirenena 475 tamin'ny 26 aprily 2018, nametraka ny Boracay eo ambanin'ny voina ny filoham-pirenena, Rodrigo Duterte – fanapahan-kevitra izay nitarika tamin'ny fomba ofisialy ny fanakatonana vonjimaika ny nosin'ny mpizahatany, ary vondrona marobe no nangataka tamin'ny fitsarana mba tsy hankatoa izany.
Nanontany ireo mpangataka tao amin'ny Fitsarana Tampony raha mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ny heverin'izy ireo fa fanapahan-kevitra be fahantany noraisin'ny filoha. Nangataka baiko fampiatoana vonjimaika ny fanakatonana sy fanesorana ireo fihariana ao amin'ny nosy ihany koa izy ireo.
Nanamarina ny fanakatonana ho ampahany amin'ny ezaka voalaza fa “fanavaozana” ny nosy ao anatin'ny olana ara-tontolo iainana ny manampahefana. Saingy taorian'ny nitaterana fa efa nankatoavin'ny governemanta tany am-boalohany ny fananganana casino goavana roa ao Boracay, maro ny olona nanontany ny anton'izany.
Na izany aza, terena atao ny fanakatonana kanefa tsy misy ny rafitra tari-dalana ho amin'ny fanavaozana, na paikady hafa hampihenana ny fiantraikany amin'ny fiveloman'ireo olona monina sy miasa ao Boracay, izay maro amin'izy ireo no voatery hafindra toerana. Efa nisy fiantraikany teo amin'ireo mpiasa an-jatony sahady ny fandroahana faobe.
Nanasongadina ny voka-dratsin'ny fanakatonana eo amin'ny fiainan'ny olona – sy ny fiveloman'izy ireo ny pejy Facebook Friends of Boracay (Naman'i Boracay). Tafiditra ao anatin'ireo fanambarana nangonin'ny fikambanana fiarahamonina sivily nandritra ny iraka fanadihadiana sy firaisankina nataon'izy ireo tany amin'ny faritr'i Boracay sy ny faritany Aklan tamin'ny 16-19 aprily 2018 ireo fijoroana vavolombelona an-tserasera ireo.
Ny sasany amin'ireo fikambanana ireo dia: Bayan-Aklan, Naman'i Boracay, Tabang Aklan Action Center, Gabriela Panay-Guimaras, Foibe momba Fiahiana ny Tontolo iainana, ny Ekipa Iloilo Pride, ary ny Sendika Nasionalin'ny Mpisolovavam-bahoaka..
Mpitari-dia iray nizara ny fiantraikan'ny fanakatonana an'i Boracay eo amin'ny fianakaviany:
Sary: Friends of Boracay. Nahazoana alalana.
Mpitari-dalana ao Boracay aho. Nandritra ny 11 taona aho no teto Boracay. Tena mavesatra ny zava-mitranga aminay; mpitari-dalana 2.000 izahay. Tsy mandray karama ara-potoana satria mandray vola amin'ny asa vita. Nankany amin'ny Departemantan'ny Asa aho noho ny fanakatonana ny Boracay. Manana fiahiana ara-tsosialy aho, izay nandraisako anjara nandritra ny enin-taona. Nangataka aho raha afaka mahazo fampindram-mbola, amin'izay mba manam-bola hisakafoanana. Monina amina trano baoritra ao amin'ny Wetland (tany mando) aho. Ny fanontanianay dia, hisy asa hafa ho azo atao ve? Tsy an'asa izahay, kanefa mila misakafo isan'andro. Manan-janaka teo aho ary mandefa vola azy ireo any Bacolod aho. Mila fanampiana ara-bola izahay.
Nitantara ny fihetsika mahery setra nataon'ny manampahefana nalefa hampahafantatra ny taratasy fandroahana ho an'ireo orinasa madinika sy ireo tompon'ny toeram-pialatsasatra ao amin'ny nosy ny mponina iray:
niavian'ny sary: Sakaizan'i Boracay. Nahazoana alalana.
Tompoko, te hizara ny tantara nataon'izy ireo taminay teto izahay. Nampahafantarina Baiko Mampiseho ny Antony sy Fanamarihana Hiala ny Toerana izahay [avy amin'ny minisiteran'ny ny tontolo iainana]. Rehefa tonga izy ireo, dia niaraka tamin'ny polisy dimy manao fanamiana miaramila sady mitondra basy. Natahotra izahay satria teo ny ankizy. Niverimberina teo amin'ireo trano tao izy ireo. Nomeny 15 andro izahay hialàna ny tranonay.
Niaina toe-javitra mitovy amin'izanyavy tamin'ny polisy ihany koa ny mpandraharaha iray mpitondra mpandeha:
Sary: Sakaizan'i Boracay. Nahazoana alalana.
Efa tsy manana asa ny olona, kanefa mbola manao zavatra amin'ny alalan'ny fandrahonana ihany izy ireo. Izay no mahatonga anay hanontany hoe, ao anatin'ny fandravàna ihany koa ve izahay? Tsy dia misy intsony ny mpandeha; mivezivezy izahay saingy tsy misy fidiram-bola. Horavàn'ny “bulldozer” tahaka ny alika ve izahay ary avela hatory eny an-dalana? Eny tokoa, tsy hanohitra izahay raha potehina, satria mitam-piadiana be izy ireo. Tsy manan-kaleha izahay. Manana fahatsapana izahay ary tena matahotra mafy izahay satria mitam-piadiana izy ireo.
Nanizingizina ireo mpanakato momba ny Fasika fa ny fihetsika manokan'ny governemanta no niteraka olana voalohany indrindra:
Manao zava-kanto (asa-tanana) amin'ny fasika nandritra ny efa-taona izahay mirahalahy avy. Avy ao Boracay izahay. Tsy manimba ny nosy izahay. Ireo manangana tranobe nahazo alalana avy amin'ny [minisiteran'ny tontolo iainana ao amin'ny governemanta] no manimba an'i Boracay.
Lahatsoratra Facebook iray nampalaza ny fomba fijerin'ny maro izay miahiahy momba ny manjo ireo afindra toerana:
Amin'ny maha mpiaro ny tontolo iainana ahy, tiako havaozina ihany koa izany…..SAINGY MARARY KOKOA AHO noho ireo olona iharan'ny fanakatonana kanefa tsy misy ny fandaminana sy ny vinavina avy amin'ny governemanta amin'ny fiantohana ny fiarovana azy ireo alohan'ny fanakatonana
Araka ny tatitra tamin'ny iraka firaisan-kina sy fanadihadiana voalohany, nahazo taratasy mba handrava sy hiala ny tranon'izy ireo ny 40% n'ny mponina ao amin'ny nosy. Avy amin'ny mpiasam-panjakana izay narahin'ny polisy mitam-piadiana be ireo taratasy fanamarihana ireo, izay polisy 600 mahery no naparitaka tao amin'ny nosy andro vitsy mialoha ny fanakatonana voatendry.
Ho setrin'ny tabataba, nandrahona hanakatona an'i Boracay mandritra ny fotoana maharitra ela ny filoha Duterte — saingy tsy manaiky lembenana ireo mpiasa, mponina sy ny mpanohana azy ireo. Manohy miaro ny fivelomany izy ireo ary manohitra ny fidiran'ireo casino goavana ao amin'ny nosy.